Yesaia 19 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Egypt ho atemmusɛm (1-15)
Egyptfo behu Yehowa (16-25)
Wobesi afɔremuka ama Yehowa wɔ Egypt (19)
19 Egypt ho atemmusɛm ni:+ Hwɛ! Yehowa te omununkum a ɛho yɛ hare so, na ɔreba Egypt. Egypt anyamehunu no ho bɛpopo n’anim,+Na Egypt koma bɛnan wɔ ne mu. 2 “Mɛma Egyptni asɔre atia Egyptni,Na wɔne wɔn ho ako,Onua ne onua, ɔyɔnko ne ɔyɔnko,Kurow ne kurow, ahenni ne ahenni. 3 Egypt honhom bɛbotow,Na mɛsɛe ne nhyehyɛe.*+ Wɔbɛdan akɔ anyamehunu hɔ,Na wɔakɔ adutofo* ne asumanfo ne adebisafo nkyɛn.+ 4 Mede Egypt bɛhyɛ otirimɔdenfo bi nsa sɛ ne wura,Na ɔhene a ne tirim yɛ den adi wɔn so,”+ asafo Yehowa, nokware Awurade no, asɛm ni. 5 Ɛpo no mu nsu bɛyow,Na asubɔnten no bɛyow na adan asaase kesee.+ 6 Nsubɔnten no bɛbɔn;Nil a ɛwɔ Egypt no asuasu bɛyow ayɛ asaase kesee. Demmire ne sibiri bɛporɔw.+ 7 Afifide a ɛwɔ Asubɔnten Nil kɔn so ne Nil ano bɛhyew,*Na Nil ho nsaase a wɔadua so nneɛma+ nyinaa bɛkyen.+ Mframa behuw akɔ ama ayera koraa. 8 Apofofo werɛ bɛhow,Wɔn a wɔtow nnarewa wɔ Nil mu bedi abooboo,Na wɔn a wogu asau wɔ nsu no mu no, wɔn dodow so bɛtew. 9 Wɔn a wɔyɛ asaawa+ ho adwuma*Ne wɔn a wɔnwene nwera ani bewu. 10 Ne ntamanwemfo bɛbotow;N’apaafo nyinaa bedi awerɛhow.* 11 Soan+ mpanyimfo yɛ nkwaseafo. Farao afotufo mu anyansafo afotu yɛ nsɛnhunu.+ Ɛbɛyɛ dɛn na moatumi aka akyerɛ Farao sɛ: “Meyɛ anyansafo aseni,Meyɛ tete ahemfo aseni”? 12 Afei w’anyansafo no wɔ he?+ Sɛ wonim gyinae a asafo Yehowa asi wɔ Egypt ho a, ma wɔnka nkyerɛ wo. 13 Soan mpanyimfo adi nkwaseasɛm;Nof*+ mpanyimfo nso, wɔadaadaa wɔn;Egypt mmusua mu atitiriw ama ɔman no afom kwan. 14 Yehowa ahwie ahoyeraw honhom agu Egypt so;+Na wɔama Egypt de ne ti repempem wɔ nea ɔyɛ biara mu,Te sɛ ɔsabofo a ɔretetew hwe ne fe mu. 15 Na Egypt rennya adwuma biara nyɛ,Eti oo, dua* oo, dua foforo oo, sare tenten* oo, ɛrennya adwuma biara nyɛ. 16 Saa da no, Egypt bɛyɛ sɛ mmea. Ehu bɛma wɔn ho apopo, asafo Yehowa nsa a ɛyɛ hu a ɔbɛma so atia wɔn no nti.+ 17 Na Yuda asaase no bɛma Egypt abɔ hu. Sɛ wɔte Yuda asaase din a, wobesuro esiane gyinae a asafo Yehowa asi wɔ wɔn ho nti.+ 18 Saa da no, Egypt nkurow anum bɛka Kaanan kasa+ na wɔaka ntam sɛ wobedi asafo Yehowa nokware. Wɔbɛfrɛ kurow baako sɛ Ɔsɛe Kurow. 19 Ɛda no, wobesi afɔremuka ama Yehowa wɔ Egypt asaase no mfinimfini, na wɔde edum besi ne hye so ama Yehowa. 20 Na ɛbɛyɛ sɛnkyerɛnne ne adanse ama asafo Yehowa wɔ Egypt asaase so; efisɛ nhyɛsofo no nti, wobesu afrɛ Yehowa na ɔbɛsoma ogyefo kɛse bi ama wabegye wɔn. 21 Yehowa bɛma Egyptfo ahu no, na saa da no, Egyptfo behu Yehowa. Na wɔbɛbɔ afɔre de akyɛde aba, na wɔbɛhyɛ Yehowa bɔ na wɔadi so. 22 Yehowa bɛbɔ Egypt.+ Ɔbɛbɔ no na wasa no yare. Wɔbɛsan aba Yehowa nkyɛn, na obetie wɔn adesrɛ na wasa wɔn yare. 23 Ɛda no, ɔkwantempɔn+ bi befi Egypt akɔ Asiria. Afei Asiria bɛba Egypt na Egypt akɔ Asiria. Na Egypt ne Asiria bɛbom asom Onyankopɔn. 24 Saa da no, Israel bɛkɔ akɔka Egypt ne Asiria ho,*+ na ɛbɛyɛ nhyira wɔ asaase mfinimfini, 25 efisɛ asafo Yehowa ahyira wɔn aka sɛ: “Nhyira nka me man Egypt, ne me nsa ano adwuma Asiria, ne m’agyapade Israel.”+
^ Anaa “kaberɛkyerefo.”
^ Anaa “bekisa.”
^ Anaa “Wɔn a wɔto asaawa.”
^ Anaa “kra bedi awerɛhow.”
^ Anaa “Memfis.”
^ Anaa “aboa dua.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “berɛw anaa demmire.”
^ Anaa “Israel bɛto Egypt ne Asiria so abiɛsa.”